Vahaolana amin'ny efitrano fivoriana | Brocade Smart Space Technology Co., Ltd.
Ny efitrano fivoriana maoderina dia feno olona manana fitaovana isan-karazany misy karazana fampidirana isan-karazany. Mila mifandray, manatrika ary miara-miasa izy rehetra. Tsy maintsy atao ireo fifandraisana ireo eo no ho eo sy intuitive miaraka amin'ny fandefasana data tsy miovaova ary mora zaraina.
Brocade dia manome vahaolana amin'ny tariby sy tariby tsy misy ilana azy ho an'ny mpiara-miombon'antoka sy orinasa. Mampiasa teknolojia HDMI izahay hanovana ny efitrano fihaonanao ho lasa sehatr'asa mahomby sy mahomby.
Vahaolana tariby: Vahaolana efitrano fihaonambe miaraka amin'ny kit HDMI Extender
Ny vahaolana efitrano fandraisam-bahiny fihaonambe Brocade 4K HDMI Extender-DK02 dia natao ho mora vidy, mora apetraka, mora ampiasaina ary mandaitra amin'ny fomba mahery vaika ho fampisehoana sy vahaolana amin'ny fitantanana signal audio-visual. Ny vahaolana dia miaraka amina mpandefa birao misy fahan'ny 1 HDMI, mpandray an-rindrina misy fivoahana 1 HDMI, adaptatera 2 ary fifandraisana misy tariby 1 Cat5e / 6. Ity vahaolana ity dia misy koa loharano famantarana toy ny solosaina misy seranana 1 HDMI avy amin'ny birao sy fampisehoana misy seranana 1 HDMI ho an'ny mpanatrika ny fihaonambe. Ny antsipiriany dia ny mpampita hafatra mampifandray solosaina misy tariby HDMI 1 ary mampifandray ilay mpandray amin'ny tariby 1 Cat5e / 6, raha toa kosa ny mpampandray dia mampifandray ilay fampisehoana amin'ny tariby HDMI iray ary mampifandray ireo mpampita amin'ny tariby Cat5e / 6 ihany. Miaraka amin'ny haitao HDMI, ny kit dia afaka mamindra ny horonantsary UHD 4K / 60hz ka hatramin'ny 197 metatra raha toa ka afaka hatrany amin'ny 393 metatra ny signal 1080p. Ny vahaolana efitrano fandraisam-bahiny DK02 dia misolo ny asa famolavolana sy ny fametrahana ora maro ary vahaolana tonga lafatra ho an'ny tsenan'ny teknolojia AV orinasa izany.
Vahaolana tsy misy tariby: Vahaolana efitrano fihaonambe miaraka amin'ny kit extender Wireless HDMI
Ny vahaolana brocade Wireless HDMI extender kit-CTS200 tsy misy vahaolana dia vahaolana mety ho an'ny efitrano fihaonambe. Ny vahaolana dia miaraka amina mpandefitra birao misy fahan'ny 1 HDMI, mpandray rindrina misy fivoahana 1 HDMI ary adaptatera 2. Ity vahaolana ity dia misy koa loharano famantarana toy ny solosaina misy 1 HDMI avy amin'ny birao sy fampisehoana misy 1 HDMI ho an'ny mpanatrika ny fihaonambe. Ny antsipiriany dia ny mpampita hafatra mampifandray solosaina misy tariby HDMI 1 raha mampifandray ilay fampisehoana amin'ny tariby HDMI iray kosa ny mpandray. Miaraka amin'ny haitao WIFI HDMI sy tsy misy tariby, ny kit dia afaka mamindra ny horonantsary UHD 4K / 30hz ka hatramin'ny 197 metatra raha toa ka 656 metatra kosa ny signal 1080p. Tsotra be ilay izy. Atsofohy fotsiny dia milalao. Tsy ilaina ny fametrahana mpamily. Amin'ny CTS200 dia azonao atao ny mizara izay eo amin'ny fitaovanao isan-karazany amin'ny efijery fampisehoana amin'ny tsindry tokana.